रुँदा शरीरलाई मिल्छ यस्ता नौ फाइदा – Health Post Nepal
२०७८ भदौ २१ गते १२:५६
रोएपछि शरीरमा कोर्टीसोल नामक तनाव उत्पन्न गर्ने हर्मोन कम हुन्छ। कोर्टीसोलको फाइदा भएपनि यसले धेरै तनाव सृजना गर्दछ, जुन दिमाग र शरीरका लागि एकदम घातक हो।
शारीरिक पीडा भन्दा भावनात्मक पीडालाई सम्हाल्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। शरीरको पीडालाई एउटा औषधी खाने बित्तिकै कम हुनसक्छ तर भावनामा ठेस पुगेपछि कसरी निको बनाउनेरु मनोचिकित्सकहरूले भावनात्मक पीडाका कारण डिप्रेशन हुने बताउँछन्। यसको सजिलो उपाय हो रुनु। यसले पीडालाई कम गर्दछ। वैज्ञानिकहरुले गरेको अध्ययनमा रोएपछि दिमागबाट न्युरोट्रान्समिटर निस्किन्छ जसले भावनात्कम पीडालाई कम गर्दछ।
४. दृष्टिमा सुधार आउँछ
५. रुनु नवजात शिशुको स्वास फेर्नुसँग सम्बन्धित हुन्छ
९. आँशुमा ज्यादा मात्रामा इलेक्ट्रोलाइट हुन्छ
‘सेक्स’ गर्दा महिलाले किन निकाल्छन् आवाज?